I-Disney kunye neMiyazaki ephefumlelweyo yeCrayon Mashup | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Disney isebenza njenge Umthombo wokhuthazo kubabonisi abaninzi, ngaphandle kokutsala umdla wabalandeli abaninzi kwihlabathi liphela abaya kwinethiwekhi yoluntu okanye iwebhusayithi ukuze baqwalasele inqaku elahlukileyo elinikwa ngumzobi kuloo mntu ukhethekileyo ukusuka kwenye yeefilimu zolu phononongo luthandwayo kunye nomdlalo bhanyabhanya.
UDada ngomnye wabo bazobi iphefumlelwe ziimovie zeDisney, kodwa ngeli xesha lizisa noHayao Miyazaki kweminye imizekeliso eyenziwe ngeepensile ezinemibala apho enza khona oonobumba ababini ebusweni obunye. Uluvo oluyintsusa olusisa kwizibini ezithandwayo zeDisney kunye nezo zintle ezivela kwiStudio Ghibli.
Ubuhle kunye nerhamncwa ngu umzekelo ogqibeleleyo ukubonisa umsebenzi kaDada ngeepensile zakhe ezinemibala. Embindini wobuso sifumana uBella ngelixa kwelinye icala sifumana iRhamncwa, ukuya ngqo kumzekeliso ogqityiweyo kunye nokwenziwa kwasekuqaleni.
Kukwenzeka okufanayo ngeNkosazana uMonoke apho sifumana khona inkosazana nengcuka yayo kubuso obufanayo nobunye ubuhle obuhle ngale mibala ikhethwe kakuhle kunye neenkcukacha ezintle kwisilwanyana ngokwaso.
Sinokunye okucacileyo ngeTarzan kunye neKerchak ukuya jika kwelona cala lityeke ngakumbi Ukusuka kuloo movie ibalaseleyo yeDisney. Umgangatho ophezulu wemashup osibeka phambi kwabalinganiswa abaphambili beefilimu ezithile zoopopayi.
Inikiwe ibonisa eyayo uthando olukhulu lokuzoba kunye nabalinganiswa beempawu ezibonakalayo. Une sokanye i-Instagram ukumlandela kwaye ufumane okungakumbi ngomsebenzi wakhe, kubandakanya iividiyo apho ungasondela kwimizekeliso yakhe.
Unamangeniso amaninzi malunga iindlela ezahlukeneyo isuka kwimiboniso eyahlukeneyo kwiDisney ukusukela koku kwaye isuka Le enye. Apha kwimiyazaki ngokugqwesa kwakhe kwimifanekiso eshukumayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » IMashups iphefumlele imizobo evela kwiDisney nakwiimovie zeHayao Miyazaki